Akụkọ Bible: Eze Ọma Ikpeazụ Chịrị Izrel - Ebe Ndịàmà Jehova Na-edebe Ihe n’Ịntanet
JOSAYA dị naanị afọ asatọ mgbe ọ ghọrọ eze nke alaeze ebo abụọ nke Izrel nke dị n’ebe ndịda. Nke a bụ afọ ndụ pere nnọọ mpe mmadụ ịbụ eze. N’ihi ya, ndị okenye ụfọdụ nyeere ya aka na mbụ ịchị mba ahụ.
Mgbe Josaya bụworo eze afọ asaa, ọ malitere ịchọ Jehova. Ọ gbasoro ihe nlereanya nke ezi ndị eze dị ka Devid, Jehoshafat, na Hezekaya. E mesịa, mgbe Josaya ka dị nnọọ afọ iri na ụma, o mere ihe dị ka dike.
Ruo ogologo oge, ihe ka ọtụtụ ná ndị Izrel anọwo na-eme ihe ndị jọgburu onwe ha. Ha na-efe chi ụgha dị iche iche ofufe. Ha na-akpọ isi ala enye arụsị. N’ihi ya, Josaya na ndị ikom ya malitere iwepụsị ofufe ụgha n’ala ahụ. Nke a abụghị obere ọrụ ebe ọ bụ na ọtụtụ mmadụ na-efe chi ụgha dị iche iche. Ị pụrụ ịhụ Josaya na ndị ikom ya n’ebe a ka ha na-etipịasị arụsị niile ahụ.
Ka e mesịrị, Josaya nyere ndị ikom atọ ọrụ iwuzi ụlọ nsọ Jehova. A nakọtara ndị Izrel ego ma were ya nye ndị ikom ahụ ka ha jiri ya na-akwụ ụgwọ ọrụ ahụ a ga-arụ. Mgbe ha na-arụ ọrụ n’ụlọ nsọ ahụ, onyeisi nchụàjà, bụ́ Hilkaya, chọtara otu ihe dị mkpa n’ebe ahụ. Ọ bụ akwụkwọ iwu nke Jehova mere ka Mozis dee ogologo oge gara aga. O furu efu kemgbe ọtụtụ afọ.
E ji akwụkwọ ahụ jekwuru Josaya, o wee rịọ ka a gụpụta ya ka ya nụ. Ka Josaya na-ege ntị, ọ chọpụtara na ndị Izrel anọghị na-edebe iwu Jehova. Nke a wutere ya nke ukwuu, o wee dọwaa uwe ya, dị ka ị pụrụ ịhụ n’ebe a. O wee sị: ‘Jehova na-ewesa anyị iwe n’ihi na nna anyị hà edebeghị iwu ndị e dere n’ime akwụkwọ a.’
Josaya wee nye Hilkaya onyeisi nchụàjà iwu ịchọpụta ihe Jehova ga-eme ha. Hilkaya wee jee jụọ onye amụma nwaanyị, bụ́ Hulda. Hulda ziri ya ozi a si n’aka Jehova ka o zie Josaya: ‘M ga-enye Jeruselem na ndị niile ahụhụ n’ihi na ha efewo chi ụgha ofufe, ha emewokwa ka ala a jupụta n’ihe ọjọọ. Ma, ebe ọ bụ na gị onwe gị, bụ́ Josaya, emewo ihe ziri ezi, ahụhụ nke a agaghị abịa ruo mgbe ị nwụrụ.’
2 Ihe E Mere 34:1-28.
Afọ ole ka Josaya dị mgbe ọ ghọrọ eze, gịnịkwa ka ọ malitere ime mgbe ọ bụworo eze ruo afọ asaa?
Gịnị ka ị hụrụ Josaya na-eme na foto nke mbụ a?
Gịnị ka onyeisi nchụàjà chọtara mgbe ndị ikom ahụ na-ewuzi ụlọ nsọ ahụ?
Gịnị mere Josaya ji dọwaa uwe ya?
Olee ozi sitere n’aka Jehova nke onye amụma nwaanyị bụ́ Hulda ziri Josaya?
Gụọ 2 Ihe E Mere 34:1-28.
Ihe nlereanya dị aṅaa ka Josaya na-esetịpụrụ ndị ihe siiri ike n’oge ha bụ ụmụaka? (2 Ihe 33:21-25; 34:1, 2; Ọma 27:10)
Olee ihe ndị dị ịrịba ama Josaya mere iji mee ka ezi ofufe gaa n’ihu n’afọ nke asatọ, nke iri na abụọ, na nke iri na asatọ nke ọchịchị ya? (2 Ihe 34:3, 8)
Olee ihe ndị anyị pụrụ ịmụta n’aka Eze Josaya na Nnukwu Onye Nchụàjà bụ́ Hilkaya banyere ilekọta ebe ndị anyị na-anọ efe ofufe? (2 Ihe 34:9-13; Ilu 11:14; 1 Kọr. 10:31)
Kaadị Akụkọ Josaya
Josaya kpebiri ife Chineke n’agbanyeghị na papa ya abụghị ezigbo mmadụ. Gịnị nyeere ya aka ime ihe dị mma?